Global Voices teny Malagasy » Mitsidika any Indonezia i Clinton · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Febroary 2009 3:00 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika avylavitra
Sokajy: Amerika Avaratra, Etazonia, Indonezia, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Politika
Tonga tany Indonezia ny sekreteram-panjakana Amerikana Hillary Clinton ny Alarobia lasa teo. Nanamafy  ny “andraikitr'i Indonezia izy amin'ny fandraisana an-tànana ny olana amin'ny ankapobeny, ao anatin'izany ny fampihorohoroana, ny proteksionisma, ny fiovan'ny toetr'andro ary ny olana ara-toe-karena.” Indonezia no firenena silamo lehibe indrindra eran-tany ary fahatelo amin'ny demokrasia malalaka indrindra.
Ankoatran'ny fihaonana amin'ny mpitondra any Indonezia dia nanokana fotoana hitsidihana fari-piaraha-monina mahantra  tany Jakarta i Clinton. Nipoitra tao amina fandaharana [amin'ny fahitalavitra] ho an'ny tanora  koa izy.
Mino  ny Everything Indonesia fa manomboka vanim-potoana vaovao eo amin'ny pôlitika ivelan”i Amerika ny fitsidihan'i Clinton an'i Indonezia:
Manomboka vanim-potoana vaovao eo amin'ny pôlitika ivelan'i Amerika ny fitsidihan'ilay sekreteram-panjakana Hillary Clinton an'i Indonezia. Tsy dia misy fizahozahoana manokana, maro ny fiaraha-miasa sy ilay antsoina hoe “smart power”.
Ambaran'i Mbak Rita fa toa niha-tanora kokoa i Clinton androany :
“Tena mieritreritra aho fa toa niha-tanora sy tsara jerena kokoa izy, mety hoe noho ny tsiky sy miato nomeny nandritra ny fitsidihany taty angamba izany…Nisy olona sasany niteny tamina fandaharana fahitalavitra mahasosotra fa nilaza hoe somary tafahoatra kely ny fihetsik'i Jakara tamin'ny fitsidihany. Faly aho fa diso izay fihevitro momba azy io izay.”
Taitra  tamin'ny hakitroky ny fifamoivoizana tao Jakarta nandritry ny andro nahatongavan'i Clinton i Devi Girsang:
Amin'ny maha Jakartana zatra mihitsoka any anaty fitohanan'ny fifamoivoizana ahy dia natahotra aho hoe hangiana sy tsy hisy olona ve ny làlana. Zavatra roa ihany no masaka tato an-tsaiko raha izay; misy fampihorohoroana amin'ny baomba na fanimbàna. Tadidinao ve ny korontan'i Jakarta tamin'ny 1998, ny fanapoahana baomba ny Hotel Marriot tamin'ny 2003 ? Tokony ho azonao ny tiako hambara
Androany tokony ho tamin'ny 2 ora tolakandro teo, dia toa ny fahatongavan'ny sekreteram-panjakana US Hillary Clinton indray no nahatonga ny fitohanan'ny fifamoivoizana! Soa ihany fa mbola ampy hangalako sary ny herin'ny vatoaratry ny fakantsariko.
Tao anatina tsikera iray, manontany tena i Therry  sao dia nandefa Clinton sandoka ny US:
Hitako ny kabary nataon'i Hillary tamin'ny fahitalavitra ary tsy fantatro ho izaho ve no maninona fa toa tsy tena mitovy amin'i Hillary iny vehivavy iny.
Manomboka mieritreritra aho fa nandefa Hillary sandoka tamintsika ny governemanta US, satria ohatran'ny antitra be sy ramama be loatra iny raha Hillary!
Tsy ny rehetra no nankasitraka ny fitsidihan'i Hillary Clinton tany Indonezia. Sary avy amin'ny Jakarta androany 
Tian'i Andreas Harsono hiresaka ny olana  momba ny fahafahana ara-pivavahana, ny tsy matymanota, sy ny fanavaozana ny ara-tafika i Clinton mandritra ny fitsidihany:
“(i Clinton) dia Tokony hitandrina ary tokony tsy hiteny ny hoe “malefaka fihetsika” ny silamo any Indonezia, tahaka ny ataon'ny ankamaroan'ny diplomaty sasany. Ho an'ireo mpikambana amin'ireo vondrona mpivavaka natao tsinontsinona tany Indonezia, kisarisary tsy dia ilaina sy tsy marina io.
“Tsy ny firongatry ny tsy fifandeferana ara-pivavahana ihany no olana eo amin'ny zon'olombelona tokony noresahan'i Clinton miaraka amin'ny Filoha Susilo Bambang Yudhoyono. Ny fahafahana maneho hevitra koa dia olana goavana eo amin'ny nosy izay anehoan'ny “foko vitsy an'isa” ny fanoherany ny Fitondrana Indoneziana. Nefa any Indonezia, na ny fihetsika maneho filaminana tahaka ny fanandratana sainam-pirenena aza dia mety hampigadra anao mandritra ny fotoana maro
“Tokony ho voasarika hiresaka momba ny olana tahaka ny fahafahana ara-pivavahana, ny tsy matymanota, ary fanavaozana ara-tafika i Clinton, ho an'ny fifandraisana matotra eo amin'ny Indonezia sy US. Nefa raha manao izany izy, dia ho dify fotoana volamena iray tokony hanova ny fiainan'ny mponina maro any Indonezia izay mila manery ny governemana izay vao hahafantatra ny zony.”
Amin'ny alalan'ny Twitter, ireto manaraka ireto ny fihetsika sasantsasany manoloana ny fitsidihan'i Clinton:
waxinglyrical : ny sasany nanontany hoe iza i Hillary Clinton??
mirageinblue : nahita an'i hillary clinton aho tao amin'ny efitra fandraisam-bahiny. milay
oplet : ny Fan Club-an'i Obama dia nikarakara hetsika hanoherana an'i Hillary Clinton tany Jakarta, amin'ny filazana fa tsy matimaty [tara] aminy izy ireo taorian'ireny hazakazaka ho amin'ny fifidiana ho filoham-pirenena ireny.
Sary avy amin'ny pejy Flickr-n'ny US Department of State 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/02/25/1627/
 fari-piaraha-monina mahantra: http://indosnesos.blogspot.com/2009/02/clinton-cheered-in-visit-to-indonesian.html
 fandaharana [amin'ny fahitalavitra] ho an'ny tanora: http://indosnesos.blogspot.com/2009/02/clinton-talks-with-teens-on-local.html
 toa niha-tanora kokoa i Clinton androany: http://mbakrita.wordpress.com/2009/02/19/kompas-and-jurnas/
 Jakarta androany: http://jakartanews-update.tumblr.com/post/79223596/welcoming-message-from-kids-to-hillary-clinton
 hiresaka ny olana: http://andreasharsono.blogspot.com/2009/02/clintons-chance-to-push-beyond-cliches.html
 US Department of State: http://flickr.com/photos/statephotos/3290368997/